Ungakanani ubulili ngemuva kokukhipha isisu?
Umbuzo wokuthi ungaba nobulili emva kokukhipha isisu esanda kuvela, ngokuvamile kuvameke kwabesifazane abaye basebenza kanjalo. Ake sizame ukuphendula futhi sitshele ngokuningiliziwe ukuthi yiziphi izici ezixhomeke esikhathini sokuvuselelwa kobudlelwano bocansi ngemuva kokukhipha isisu.
Ungalala nini emva kokukhipha isisu ?
Okokuqala, siyaqaphela ukuthi ngaphansi kokwelashwa ngokwemithi yokwelapha kuyisiko ukuqonda lolu hlobo lokukhipha isisu, olwenziwa kuphela ngokuthatha imithi ekhethekile. Ngaphansi kwethonya labo, ukufa futhi ukuxoshwa kombungu ofile kusukela emgodini wesibeletho kwenzeka kuqala. Lolu hlobo lokukhipha isisu lungenziwa kuphela ngamagama amancane, ngenxa yobukhulu obuncane bombungu ngokwayo.
Ukukhuluma ukuthi ungaba nobulili obungakanani emva kokukhipha isisu, odokotela ngokuvamile babiza isikhathi samasonto 3-4. Inketho ekahle yilapho intombazane ilinda kuze kube sekupheleni kwesikhathi sokuya esikhathini futhi emva kokuphothula kwakhe ukuphothula uphinde uqale umsebenzi wobulili.
Ungalala nini emva kocingo (ukukhipha isisu)?
Lolu hlobo lokuqeda ukukhulelwa luchaza izindlela okuthiwa zokuhlinzwa. Kuhilela ukukhishwa kombungu ngokusebenzisa i-apparatus ekhethekile, okuyinto, ngenxa yokudala i-vacuum, isisusa ngokuphelele emgodini wesibeletho.
Ngemva kwalokhu, odokotela abahlinzayo ngokucophelela futhi ngokuningiliziwe bahlolisise umgodla we-uterine ukuqinisekisa ukuthi azikho izingcezu zesikhumba sombungu ezishiywe kuwo.
Njengomthetho, emva kwalolu hlobo lokukhipha isisu, ukuhlukunyezwa okukhulu kwe-endometrium ye-uterine kuyabonakala. Yilokho okushiwo, okokuqala, yisiphi isizathu sokuvimbela ukuphila kocansi kowesifazane. Ngakho-ke, odokotela batusa ukugwema ekukhulumisaneni obuseduze kwamaviki angu-4-6 kusukela ngesikhathi sokukhipha isisu. Ngalesi sikhathi ukuthi ubulili kungenzeka ngemuva kokukhipha isisu.
Izici zobuseduze obuseduze emva kokukhipha isisu
Ngokuvamile, abesifazane abaye baqedwa ukukhulelwa kwamuva, umbuzo uvela ukuthi kungenzeka yini ukuba uhlanganyele ocansini wesilwane ngemuva kokukhipha isisu.
Kumele kuqashelwe ukuthi ngalolu hlobo lobulili, ukwehlukaniswa kwemigqa ye-pelvic kuyenzeka futhi, okwenza kube nomthelela omubi ohlelweni lokuvuselelwa kwezicubu. Yingakho kungcono ukugwema lokho.
Ngakho-ke, kufanele kuthiwe ukuthi isikhathi esingakanani owesifazane angakwazi ukuya ocansini emva kokukhipha isisu kufanele sinqunywe udokotela kuphela. Ezikhathini eziningi, odokotela babiza isikhathi semasonto angu-4-6.
Ukuvuthwa, futhi ukukhulelwa akukwenzeka - izizathu
Amaphilisi e-hormonal abesifazane
I-Cyst ye-ovary kwesokunxele - izimpawu
Ingabe kubuhlungu ukukhipha isisu?
Ngingageza yini ngokuya esikhathini?
Ukuhlaziywa kwamahomoni kwabesifazane
Gaya uma uchama
Endocervicosis yomlomo wesibeletho
Okuqukethwe kwe-Salmon - ikhalori
Ibhizinisi le-flower - kanjani ukuqala ibhizinisi elivundile kusukela ekuqaleni bese uphumelela?
Izicathulo zesikole zamantombazane
I-Primrose - ekhula imbewu ekhaya
Indlela yokukhetha ingubo yomdwebo?
Isimo Sezulu ku-Pokrova - izimpawu
Imikhiqizo yokudla okudliwayo
Izibonakaliso ezinzima kakhulu ze-zodiac
Isaladi ne-recipe ham
Indlela yokugoba amakhethini ngezandla zakho?
Ukuzilibazisa ngabesifazane ngezandla zabo
I-Demonology - konke okuphathelene namademoni, inhloso kanye nemvelaphi yabo
Yiziphi izigqoko ezifashisayo ebusika 2015-2016?
Kusho ukunakekelwa kwesikhumba
Izingubo ezivela kuzo zonke ezazisondela, emidwebo ka-Edgar Artis!
Isitayela se-pop esendaweni yangaphakathi
Amacici ngamasafire namadayimane
Phela ebusika phesheya
Ukuvutha-ukubola kwevolumu enkulu